Eshibhile High izinga OEM ishidi laser cut izingxenye ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
Inqubo yensimbi yensimbi ifaka ukusika kwe-laser, okusebenzisa kakhulu ama-lasers asebenza kahle ukuze aqoshwe futhi asikwe izinto.
Ikhwalithi ephezulu yensimbi yensimbi yensimbi yokusika izingxenye-ngokunemba ishidi lensimbi laser ukusika ukucubungula izingxenye zemishini
Imikhiqizo yensimbi yeshidi inezici zesisindo esincane, amandla aphakeme, ukuqhutshwa kukagesi, izindleko eziphansi, nokusebenza okuhle kokukhiqiza ngobuningi. Zinokusetshenziswa okuhlukahlukene. Ukucubungula kusetshenziswe kabanzi kuzinto zikagesi, ezokuxhumana, imboni yezimoto, imishini yezokwelapha neminye imikhakha. Isibonelo, ezimweni zamakhompiyutha, omakhalekhukhwini, ne-MP3, ishidi lensimbi liyingxenye ebaluleke kakhulu. Ngaphezu kwalokho, isetshenziselwa ukukhiqizwa kwamadivayisi wezokwelapha, kanye nemizimba yemoto neloli (amaloli), izindiza zezindiza namaphiko, amatafula ezokwelapha, uphahla lokwakha (ukwakhiwa) nezinye izinhlelo zokusebenza eziningi.
Langaphambilini Ishidi ngokwezifiso laser ukusika izingxenye
Olandelayo: OEM ishidi laser ukusika izingxenye